Dutchtown ရှိကြီးမားသောနေထိုင်ရန်နေရာများ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 18th, 2021
Dutchtown ရဲ့သမိုင်းဝင်အိမ်ရာစတော့ရှယ်ယာအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါအမြဲသတိရတတ်တဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိတယ်။ Dutchtown သည်လူတိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်၊ ကျယ်ဝန်းသည့်နှစ်ထပ်အိမ်များ၊ ဘန်ဂလိုများအကြီးနှင့်အငယ်၊ သေနတ်အိမ်များ၊ မိသားစုအိမ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့်လေးခန်းနှင့်အရာအားလုံးကြားတွင်ရှိသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Dutchtown ရှိစျေးကွက်တွင်ပိုမိုကျိုးနွံစွာချဲ့ထွင်ထားသောအိမ်အချို့ကိုကြည့်ကြမည်။ မင်းအိမ်ကိုရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းအရွယ်အစားမှန်ကိုရှာနေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းက cozier အကျဉ်းသားတွေကိုပိုကြိုက်တာပဲ၊ Dutchtown မှာအထုပ်သေးသေးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
5457 Alabama အဘိဓါန်
ဤအိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ ရေချိုးကန်ဘန်ဂလိုတစ်လုံးသည်စတုရန်းပေ ၈၀၀ ပတ်လည်တွင်အလေးချိန်ရှိသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသောအုတ်နံရံများသည် Dutchtown ရပ်ကွက်၏တောင်ဘက်စွန်းရှိဤ ၁၁၂ နှစ်သားအိမ်၏ကျေးလက်ခံစားချက်ကိုယူဆောင်လာသည်။
ဒေါ်လာ ၉၂,၅၀၀ · Zillow ကိုကြည့်ရန်
Chippewa နှင့် South Grand အနီးတွင်အဆင်ပြေစွာတည်ရှိပြီး၊ 3425 Keokuk ၏ဒုတိယအင်ပါယာပုံစံ mansard အမိုးသည်ဤ block တွင်လူအုပ်မှပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းအပြည့်တစ်ဝက်ပါ ၀ င်သောအိမ်သည်မကြာသေးမီကပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပြီးသံမဏိအသုံးအဆောင်အသစ်များ၊ ၄၂ လက်မဗီဒိုများနှင့်ဒီဇိုင်းကောင်တာများပါ ၀ င်သည်။
မင်းကခြံကျယ်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်ရင် ၃၄၂၅ Montana ကမင်းအတွက်ပဲ။ စတုရန်းပေ ၇၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်ဤ ၁၈၉၀ အိမ်သည်ကျယ်ဝန်းသေးသည်၊ အိပ်ခန်းသုံးခန်း၊ ရေချိုးခန်းတစ်ခုတည်းနှင့်ထမင်းစားခန်းများပါ ၀ င်သည်။ ခြံခတ်ထားသောနှစ်ထပ်ခြံသည်ဥယျာဉ်ကစားရန်၊ ဖျော်ဖြေရန်သို့မဟုတ်သင်၏ခွေးပေါက်များကိုပြေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ မင်းအတွက်အစိမ်းရောင်နေရာမလုံလောက်ရင် Marquette ပန်းခြံ လမ်းပေါ်တွင်တံခါးအနည်းငယ်သာရှိသည်။
4031 Pennsylvania ပြည်နယ်
Penquillian Avenue ရှိဤအိပ်ခန်းသုံးခန်း/ရေချိုးခန်းအိမ်သည် Marquette ပန်းခြံမှခဏသာလမ်းလျှောက်ပြီးမီးဖိုချောင်များပါ ၀ င်သည်။ ဤအုတ်ခဲအိမ်များ၊ အလှဆင်မီးလင်းဖိုများနှင့်အခြားထူးခြားသောဗိသုကာလက်ရာများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မင်းရဲ့အင်္ကျီတွေကိုလိပ်ပြီးမင်းရဲ့ mini-home ကိုမင်းကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်မလား။ ဤအိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်းတစ်ခန်း၊ ၉၀၀ စတုရန်းပေရှိသောအိမ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းသင့်တင့်သောအဆင်သင့်ဖြစ်ကာသင်၏ပြီးမြောက်မှုကိုစောင့်နေသည်။ မင်း Shay's Donuts ကနေထောင့်နားမှာရှိမယ်၊ မင်းရဲ့မနက်ခင်းရှည် john ကိုအနားက Mount Pleasant Park မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။
ထုတ်ဝေသည့်အချိန်၌စာရင်းဈေးနှုန်းများသည်တိကျသည်။ ဖော်ပြချက်များသည် Zillow မှတဆင့်စာရင်းကိုယ်စားလှယ်များပေးသောအချက်အလက်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အထက်ပါစာရင်းများသည်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ DutchtownSTL.org မှကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ပါ၊ ဤစာရင်းများအပြည့်အစုံအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုသေချာဆက်သွယ်ပါ။
အောက်မှာ Filed အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ် နှင့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 18th, 2021 .
ဒိန်းမတ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Dutchtown ရှိကြီးမားသောနေထိုင်ရန်နေရာငယ်များ